विश्वकप क्रिकेटमा 'फ्लप' स्टार खेलाडी - Khelpati
विश्वकप क्रिकेटमा 'फ्लप' स्टार खेलाडी
शनिवार, असार २८, २०७६ खेलपाटी संवाददाता
एजेन्सी । सबै खेलाडीको चाहाना हुन्छ कि आफ्नो राष्ट्रको लागि विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरौँ । तर, सबैले सोचेको जस्तो हुँदैछ । उच्च लयमा रहेका खेलाडीले पनि खराब प्रदर्शन गर्न सक्छन । खराब लयका खेलाडीले उच्च प्रदर्शन गर्छन ।
इंग्ल्याण्डमा जारी १२ औं संस्करणको आईसीसी एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा समेत थुप्रै खेलाडीले आफ्नो राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् । तर, केहि अपेक्षा गरिएका खेलाडीले सोचे अनुरुप प्रदर्शन गर्न सकेनन् । जसको कारण कतिपय उत्कृष्ट टिमले लिग चरणबाट घर फर्कनु परेको छ ।
एक महिने लामो विश्वकपमा अब फाइनल खेल मात्र बाँकी रहेको छ । फाइनलमा आयोजक इंग्ल्याण्ड र न्युजिल्याण्डले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।
यस पटकको विश्वकपमा उत्कृष्ट लयमा रहेका धेरै खेलाडीले उच्च प्रदर्शन गर्न सकेनन् । विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न नसकेका ४ खेलाडी यस प्रकार रहेका छन् ।
१. मार्टिन गुप्टिल
न्युजिल्याण्डका ओपनर ब्याट्सम्यान मार्टिन गुप्टिल विश्वका एक उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान हुन् । उनि सन् २०१५ को विश्वकपमा न्युजिल्याण्डका सर्वाधिक सफल खेलाडी हुन् । उक्त विश्वकपमा उनले सर्वाधिक रन बनाउँदा न्युजिल्याण्ड पहिलो पटक विश्वकपको फाइनल पुगेको थियो ।
सोहि अनुरुप गुप्टिलले यस विश्वकपमा पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने टिमले आशा गरेको थियो । तर, पहिलो खेलमा श्रीलंकाविरुद्ध ५१ बलमा ७३ रन प्रहार गरेका गुप्टिलले त्यसपछिका खेलमा संघर्ष गर्दै आएका छन् ।
जारी विश्वकपमा न्युजिल्याण्ड फाइनलमा पुगेपनि उनले पछिल्लो ८ इनिङ्समा मात्र ९५ रन बनाएका छन् । उनको खराब लयको कारणले कप्तान केन विलियम्सन र रोस टेलरमाथि दबाब परेको छ ।
२. क्विन्टन डी कक
विश्वकप अघि भारतमा सम्पन्न इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) मा दक्षिण अफ्रिकाका क्विन्टन डी ककले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए । डी ककको टिम मुम्बई इण्डियन्सले नै उपाधि उचालेको थियो । तर, यस विश्वकपमा भने उनी असफल रहे ।
विकेटकिपर ब्याट्सम्यान डी ककबाट टिमले ठुलो आस गरेको थियो । बाँया हाते ब्याट्सम्यान डी ककले आयोजक इंग्ल्याण्डविरुद्ध ६८ रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेलेका थिए । तर, एकदिवसीय खेलमा १४ शतक प्रहार गरिसकेका उनले बाँकी खेलमा खराब प्रदर्शन गरे ।
डी कक दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्रतियोगितामा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीको सूचीमा समेत तेस्रो स्थानमा रहे । ओपनिङ ब्याटिङ गर्ने डी ककले सुरुवात राम्रो गर्न नसक्दा टिममा दबाब परेको थियो । दक्षिण अफ्रिकाले प्रतियोगितामा मात्र ३ खेल जितेको थियो । जसको कारण दक्षिण अफ्रिका सेमिफाइनल पुग असफल भएको थियो ।
३. कागीसो राबडा
दक्षिण अफ्रिकाका तीब्र गतिका बलर राबडा टिमका मुख्य बलर थिए । २४ बर्षे युवा बलर सन् २०१८ मा दक्षिण अफ्रिकाका सफल बलर घोषित भएका थिए । उनले सिएसए क्रिकेटर अफ द इयर, उत्कृष्ट टेष्ट खेलाडी र उत्कृष्ट एकदिवसीय खेलाडीको उपाधि हात पारेका थिए ।
इंग्ल्याण्डको पिचमा फास्ट बलरलाई सहयोग मिल्ने हुँदा राबडाले कमाल गर्ने सबैको अपेक्षा रहेको थियो । तर, प्रतियोगितामा उनले छाप छाड्न असफल रहे ।
राबडाले प्रतियोगितामा मात्र ११ विकेट हात पारे । जुन फास्ट बलरको लागि निराशाजनक प्रदर्शन हो ।
युनिभर्सल बोस भनेर चिनिने वेष्ट इण्डिजका क्रिस गेलको यो विश्वकप अन्तिम रहेको थियो ।
प्रतियोगिता अघि राम्रो लयमा रहेका उनले अन्तिम विश्वकपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न निकै आतुर रहेको बताएका थिए । तर, गेलले प्रतियोगितामा सोचे अनुरुप प्रदर्शन गर्न सकेनन् । लिग चरणका ८ खेल खेलेका उनले २ अर्धशतक प्रहार गर्दै २ सय ४२ रन बनाए ।
९ खेलमा मात्र २ जित हात पारेको वेष्ट इण्डिज अंक तालिकाको पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको थियो ।